people Nepal » देउवा-प्रचन्डलाई लाग्यो झट्का- भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेको जित सुनिस्चित देउवा-प्रचन्डलाई लाग्यो झट्का- भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेको जित सुनिस्चित – people Nepal
देउवा-प्रचन्डलाई लाग्यो झट्का- भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेको जित सुनिस्चित
भरतपुर- पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको चासोको विषय बनेको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । यस महानगरपालिकामा कसको कति मत आयो ? मतअन्तर कति भयो ? अब गणना हुन बाँकी वडामा कसको कति मत आउला ? सम्भावना के छ ? को विजयी होलान् ? जस्ता कौतुहलता आम जनमानसमा छाएको छ ।
भरतपुरको वडा नम्बर २६ सम्मको मत गणना सकिदासम्म पछिल्लो मत परिणाम अनुसार भरतपुरमा एमालेका ज्ञवालीले २७ हजार नौ सय ५५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । माओवादीकी रेणु दाहालले २५ हजार दुई सय ३७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । भरतपुरको उपमेयर पदमा नेपाली काँग्रेसकी पार्वती शाहले २८ हजार ६ सय ६ र एमालेकी दिव्या शर्मा आचार्यले २५ हजार एकसय ९३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
अहिलेसम्म १७ वटा वडाको मत गणना सकिएको छ । ज्ञावाली तीन हजार मत अन्तरले अगाडी हुनुहुन्छ । अब गन्न बाँकी १२ वटा वडा छन् । मत गणना गर्न बाँकी रहेका १६,२२,२३,२४ र २५ वडामा एमालेको बहुमत रहेको छ । यी मध्ये सबै भन्दा बढी मत रहेको वडा नं. १६ हो जहाँ एमालेको पल्ला भारी रहेको छ । बाँकी ७ वटा वडा मध्ये ५ वटा वडाहरु काँग्रेसको प्रभाव रहेको क्षेत्र हो भने २ वटा वडामा एमाले र काँग्रेस प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । अहिलेसम्मको मत परिणाम र यसलाई विश्लेषण गर्दा एमाले उम्मेदवार ज्ञवालीको मतान्तर कम देखिए ता पनि यस अगाडी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दाहालसंगको फराकीलो मत अन्तर सहजै क्षतीपुर्ती तिरी जित ज्ञवालीको विजयी सुनिश्चत रहेको छ ।
अहिले सम्म सार्वजनिक भएको परिणम अनुसार १७ वटा वाड मध्ये १० वटा वडामा एमाले विजयी बनेको छ भने पाँचवटा वडामा नेपाली काँग्रेस र दुई वटा वडामा मओवादी केन्द्र विजयी भएको छ ।
मत गणना गर्न बाकी रहेका वडाहरुमा १५ मंगलपुर , श्रीपुर , फुलबारी , सुर्यनगर, १६ मंगलपुर , मोहनपुर , बिजयनगर, १७ शारदानगर , रामपुर , गोब्रनी, १८ गुञ्जनगर , चनौली , शशिनगर , भूवनबस्ती, १९ शारदानगर , गुञ्जनगर , किरणगंज, २० भिमनगर , सिमलटाँडी , दद्रेनी , २१ पार्वतीपुर , मनिपुर, २२ पटिहानी , पदमपोखरी , धनौजी, २३ जगतपुर , खड्कौली , मधुपुरी, २४ जगतपुर , केरूङ्गा, शुक्रनगर, २५ अमृतनगर , शुक्रनगर , लेबरनगर , सोसी छन् ।